NgoLwesithathu, ngoMashi 12, 2008 NgoLwesibili, ngo-Mashi 11, i-2008 Douglas Karr
Ngabhala ngakho I-Twitter isikhashana ibuyile, kepha le vidiyo iyibeka kahle. Ngilandele ku- http://www.twitter.com/douglaskarr.
Tags: ukuhlolwa kwesiza
Mar 12, 2008 ku-4: 22 PM
Ividiyo ayisatholakali. 🙁
Noma kunjalo ngesihloko se-microblogging: Ngizamile izinsizakalo ezimbalwa ezifana ne-Twitter ne-tumblr, angitholanga okukhangayo okuningi ngazo. Mhlawumbe yimina nje, nginesikhathi esinzima ngokwanele sokuza nezinto kubhulogi lami eligcwele kungasaphathwa ukushicilela okuthile njalo ngehora noma nge-microblog.
Mar 12, 2008 ku-4: 49 PM
Kubukeka sengathi ibuyile manje, ungaqiniseki ngokwenzekile.
I-Micro-blogging iyi-gig enzima, ikakhulukazi kubafana abanjengami abasebenza ukuze baziphilise. Anginaso isikhathi sokubhala phansi izinto usuku lonke. Ngikucabanga njengokuningi 'kwethikha lezindaba'. Ngibona imininingwane eminingi enhle lapho ngibheka ngaphezulu intombazane lonke usuku.
Anginaso isikhathi sokubamba izingxoxo lapho - kepha kuningi okuqukethwe okuhle okudlulayo. FUTHI kuyangisiza ukucabanga ngemibono yokuthunyelwe okuzayo.
Mar 13, 2008 ku-10: 06 AM
Ngithole ibhulogi yakho ngamazwana owashiye ku-Buzz Marketing. Ngiyawathanda amavidiyo e-Common Craft Show - adiliza ubuchwepheshe obusha kuyindlela okulula ukuyiqonda futhi iyangisiza ukuyichazela abangani nabasebenza nami. Siyabonga ngokuthumela lokhu mayelana ne-twitter - I-twitter kodwa manje ngiyaqonda ukuthi KUNGANI ngiyi-twitter!